9 प्रश्नहरू Avanafil - Phcoker लिनु अघि आफैलाई सोध्न प्रश्नहरू
1। अानानाफिल (330784-47-9) के हो?
2। Avanafil वर्क्स - के लिए avanafil के लिए प्रयोग के छ?
3। Avanafil Dosage - मैले कस्तो अन्नानाफिल गर्नुपर्छ?
4। Avanafil नतिजाहरू - कसरी अधिकतम लाभका लागि अानाफिल लिनु हुन्छ?
5। Avanafil दुष्प्रभाव - सक्छ Avanafil मलाई साइड इफेक्ट गर्न सक्छ?
6। Avanafil जोखिम - के अन्य औषधीहरूले अनावश्यक प्रभाव पार्नेछन्?
7। अवनफिल समीक्षाहरू - के एक सुरक्षित एड ड्रग Avanafil छ?
8। Avanafil पाउडर प्रदायक - म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छ Avanafil (330784-47-9)?
9। Avanafil ED उपचारको लागि ताडाफाफिल र सिल्डेनफिल किटरेटको तुलनामा
अवानाफिल खुराक चिकित्सा क्षेत्रको सबैभन्दा नयाँ औषधि हो जुन पुरुषहरूमा रोगको उपचार गर्दछ। पुरुषहरुमा यौन नपुंसकता को मामलाहरु हालका वर्षहरुमा बढेको छ। सर्तले पुरुषहरूलाई आफ्नो पार्टनरहरू तृप्त गर्न गाह्रो बनाउँदछ किनकि उनीहरूको यौन अ enough्गहरू पर्याप्त कडा हुँदैनन् र यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने केहि छोटो समयको लागि। सामान्यतया, जब एक मानिस उत्तेजित हुन्छ, रगत लि inter्गमा प्रवाहित गर्दछ यसलाई सफल सम्भोगको लागि विस्तार गर्दै। यद्यपि, जब पीडितबाट डिसफंक्शन (ED), तपाईं यौन जीवनमा कठिनाइहरू हुनेछ। Avanafil एक उचित समय को लागि निर्माण को बनाए राखन को लागि आफ्नो लिंग मा रक्त प्रवाह को बढावा गरेर काम गर्दछ। किन सिब्रामामिन वजन घटाने मा धेरै लोकप्रिय छ?
मेडिकल शोधकर्ताहरूले अवस्थालाई मद्दत गर्न विभिन्न औषधि खोज्ने प्रयास गरेका छन् जसले विषाग, ताडलाफिल, सिल्डेनफिल र अब अवानाफिलको रूपमा धेरै औषधि विकास गर्न सकेन। सुशील कोइराला एक समस्या हो जुन एक आत्म आत्मसम्मानलाई कम गर्दछ र हाम्रो समाजमा पनि तलाकहरुको एक महत्वपूर्ण कारण भएको छ। Avanafil तपाईंको सबै समस्या समस्याहरूको समाधान हो। ड्रगले तपाईंको पेनिसमा रगतको बहालको संरक्षण गरी उचित समयको लागि आफ्नो निर्माणलाई सहयोग पुर्याउनेछ। यद्यपि, लागू औषधको लागी, तपाईलाई पहिला सुगन्धित र तपाईंको लिंगमा बह्ने रगत पाउनु पर्छ। ती अनुमोदन पछि यो औषधि प्रयोग गरिरहनुको लागि, सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ र एक उत्कृष्ट दर्जा प्रदान गर्नेहरूलाई आशा प्रदान गर्ने यो अझै प्रयास गर्न को लागी।
एक सावधानीको रूपमा, Avanafil मात्रै कुनै औषधि खरीद गर्नु अघि, तपाईंले केही अनुसन्धान गर्नु पर्छ र बुझ्दछ यो कसरी कार्य गर्दछ। ड्रग्सले बिभिन्न व्यक्तिलाई बिभिन्न किसिमको प्रतिक्रिया दिन्छ, र एक औषधि जसले तपाइँको साथीलाई मद्दत पुर्‍यायो तपाइँको शरीरलाई स्वास्थ्य जटिल बनाउन सक्छ। तसर्थ, आफ्नो प्रतिरक्षा जाँच पछि सही औषधि र उचित खुराक प्राप्त गर्न मद्दत गर्न आफ्नो डाक्टरलाई समावेश गर्न सल्लाह दिइन्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केहि व्यक्तिहरूले औसत निर्माण प्राप्त गर्दछन् जबकि अरूले एभनाफिल प्रयोग गरेपछि अधिकतम परिणामहरू प्राप्त गर्दछन्। त्यहाँ तिनीहरू पनि छन् जो उनीहरूलाई चाहिने परिणामहरू प्राप्त गर्न उच्च खुराक लिन बाध्य छन्। केहि चिकित्सा सर्तहरूले तपाईलाई विकल्पहरू सीमित गर्न सक्दछ मार्केटमा उपलब्ध डिसफंक्शन ड्रगहरूको लागि।
अवानाफिल एक मौखिक औषधि हो जुन डिसफन्क्शनको उपचारमा उपयोगी साबित भएको छ। औषधि फास्फोडीस्ट्रेज अवरोधकर्ताहरूको एक वर्गको हो जुन अन्य औषधी जस्तै भियाग्रा, र लेविट्रा हो। अवानाफिल जुन अमेरिकाको संयुक्त राज्यहरूमा सेत्राको रूपमा बिक्री गर्दछ, अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनले अप्रिल 27th, 2012 केही वर्षको अध्ययन पछि अनुमोदन गर्‍यो। अनुमोदित Avanafil खुराक शक्तिहरू 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, र 200 मिलीग्राम हो। यद्यपि, गम्भीर साइड इफेक्टबाट बच्न बिरामीलाई सबैभन्दा पहिले उपलब्ध सबैभन्दा कम खुराक प्रयोग गर्न सल्लाह दिइनु पर्छ। अवानाफिल तीन अलग अलग परीक्षणहरू पार गरिए पछि स्वीकृत भयो जहाँ औषधि आदर्श साबित भयो र परीक्षणमा प्रयोग हुने सबै पुरुषहरूको लागि काम गर्‍यो। युरोपमा लागूपदार्थको बजारका लागि आवेदन मार्च 2012 मा युरोपियन युनियनमा पेश गरिएको थियो। राज्य सम्बन्धित एजेन्सीहरूले अनुमोदन गरे पछि यो औषधी अब विभिन्न ब्राण्ड अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा बेचिदै छ।
सर्वेक्षणको बखत समस्या रिपोर्ट गर्न अधिकांश पुरुषहरूको असफलताका कारण शिथिलताका स्तरहरूको निर्धारण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, उमेर बढेर यौन नपुंसकता बढ्छ। यसको मतलब वृद्ध व्यक्तिहरूले मध्यम आयु र युवाहरू भन्दा समस्या अनुभव गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। उदाहरणका लागि, 18 देखि 59 वर्ष बीचका पुरुषहरूको 10% को नपुंसकता दर छ। अर्को समान अध्ययनले पत्ता लगायो कि 50-59 उमेरका पुरुषहरूले 3.5-18 वर्ष उमेरका बीचका व्यक्तिको तुलनामा एक एक्स्ट्र्याक्सन डिसफंक्शनको 29% उच्च दर थियो। 70 बर्ष उमेर र माथिका व्यक्तिसँग 61% dysfunction को दर छ।
के कारण डिसफंक्शन हुन्छ?
पुरुष यौन उत्तेजना एक प्रक्रिया हो जुन शरीरका विभिन्न अंगहरू र टिश्युहरू जस्तै मस्तिष्क, भावनाहरू, हर्मोनहरू, मांसपेशिहरू, स्नायुहरू र रक्त वाहिकाहरूमा समन्वय समावेश गर्दछ। यदि कुनै एक अंशमा समस्या छ भने डिसफंक्शन हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा तनावले अवस्थालाई बिगार्न सक्छ र यो पुरुष र महिला दुबैमा यौन समस्याहरूको एक प्रमुख कारण हो। धेरै जसो केसहरूमा मनोवैज्ञानिक र शारीरिक मुद्दाहरूको संयोजनले डिसफंक्शनलाई निम्त्याउँछ। एक सानो शारीरिक अवस्था जसले यौन प्रतिक्रियालाई सुस्त बनाउँदछ चिन्तामा निम्त्याउन सक्छ तपाईलाई इरेक्शन कायम राख्न गाह्रो बनाउने। कहिलेकाँही मानिसहरूले समस्याहरू देख्दैनन् जसले इरेक्शन कठिनाइहरू निम्त्याउँदछन् र अवस्था बिग्रिनु अघि यसलाई गोप्य राख्न रोज्छन्।
Dysfunction को शारीरिक कारणहरु
केही भौतिक शरीर कारकहरू निर्माणमा कठिनाइहरूको लागि जिम्मेवार छन्, र तिनीहरू निम्नानुसार छन्।
हृदय रोग, तपाईंको हृदयमा तपाईंको शरीरको विभिन्न भागहरूमा रगत पम्प गर्न तपाईंको हृदय जिम्मेवार छ। यदि हृदय राम्रो स्थितिमा छैन भने, तपाईं आफ्नो निर्माण को बनाए राखन मा कठिनाइहरु हुनेछ। तपाईं एक उचित निर्माण अनुभव गर्न को लागि, यौन आचरण को समयमा रक्त को निरन्तर प्रवाह राख्न को लागि तपाईंको दिल स्वस्थ हुनु पर्छ।
एथेरोस्क्लेरोसिस (रक्त वाहिका धारावाहिकहरू), जब तपाईंको मुटुले रगत पम्प गर्दैछ, र जहाजहरूले यसलाई तपाईंको शरीरको विभिन्न भागहरूमा पुग्न अनुमति दिँदैन; यो dysfunction बाहेक धेरै समस्याहरुमा परिणाम दिन सक्छ। तसर्थ, यदि तपाईंको रक्त वाहिकाहरू भर्न र पातलो भित्तामा पाइपिंगको कारण पातलो छन् भने, तपाईंको लिis्ग सफल सेक्सको लागि पर्याप्त कडा हुन पर्याप्त रगत प्राप्त गर्दैन। एक उचित स्वास्थ्य जाँच तपाईको समस्याको वास्तविक कारण निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण छ डाक्टरले Avanafil लिन सिफारिस गर्नु भन्दा पहिले।
प्रोस्टेट क्यान्सर उपचार वा बढेको प्रोस्टेट, कहिलेकाहिँ पुरुषले उनीहरूको पुरुष अंग पर्याप्त मात्रामा ठूलो हुँदैन र म्यानपेशी बढाउने शल्य चिकित्सा वा सर्पको प्रयोग गर्न निर्णय गर्छन्। तपाईंको हृदयले प्राकृतिक खराबी भन्दा बाहेक एक अतिरिक्त अंगमा पर्याप्त रक्त आपूर्ति गर्न सक्दैन। प्रोस्टेट क्यान्सरले यौन अंग नसकेको र हार्मोन्स पनि यौन उत्तेजना बढाउँछ।
पदार्थ दुर्व्यसन र मदिरापानलाई डिसफंक्शनको अर्को प्रमुख कारणको रूपमा उद्धृत गरिएको छ। तपाईं रक्सीको सेवन कम गर्न मा काम गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईं Avanafil प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहुन्छ। नियमित व्यायाम पनि शरीरमा अतिरिक्त बोसो जलाउने र आफ्नो मुटु स्वस्थ राख्न एक उत्तम उपाय हो।
तपाईंको मस्तिष्क घटनाहरूको शृंखला सुरू गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ जुन उत्तेजनाको लागि नेतृत्व गर्दछ जस्तै ट्रिगरिंग भावनाहरू र यौन उत्तेजना। यदि तपाईं केहि अरूको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नेछ। उत्तेजनात्मक कठिनाइहरूको केही मनोवैज्ञानिक कारणहरूमा अन्य मानसिक मुद्दाहरू बीचमा डिप्रेसन, तनाव र चिन्ता समावेश छ। यदि तपाईं सम्बन्ध समस्या अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसोभए तपाईंको कठिनाइ हुनेछ या त तपाईंको पार्टनरले तपाईंको दिमाग राम्रो स्थितिमा छैन। त्यस क्षण तपाईंको दिमागले तपाईंको पार्टनरको साथ तपाईंको यौन अनुभवको बारेमा सोच्नको सट्टामा अन्य मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ भने, निर्माण समस्या हुनेछ।
Avanafil वर्क्स - के लिए avanafil के लिए प्रयोग के छ?
यो औषधिले फास्फोमेस्टरेस्ट टाइप5को कार्य रोक्न कार्य गर्दछ। सुधार तंत्रिका प्रणाली संकेतहरू समावेश गर्ने गतिविधिहरूको एक श्रृंखला हो र लिंग ऊतकहरूमा रासायनिक संकेतहरूको रिलीज हो। तपाईंको लिंगमा रासायनिक सन्देशवाहकहरू चक्रवर्ती जीएमपी हुन् जसले रक्त पोत पर्खालहरूमा मांसपेशिहरु लाई आराम गरेर पनीर रक्त वाहिकाहरू फैलाउँदछ। यसैले, रगतले तपाईंको यौन अंगमा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ यो खडा हुन्छ र रगत पछि रक्सी खानुपर्छ। फास्फोमेस्टरएस्टर प्रकार5जुन पेनिसमा रहेको छ साइक्लिक जीएमपी प्रकार्यलाई ब्रेक गर्दछ, यसरी यसरी रगतको प्रवाह रोक्छ। यसको मतलब यो हो कि रक्त तपाईंको यौन अंग को प्रवाह को रूप मा कमी को कारण पर्याप्त नहीं हुनेछ। Avanafil (330784-47-9) फास्फोमेस्टरसेन्सलाई अभिनय गरेर रोक्न, कुनै चक्रवात GMP हस्तक्षेप रोक्न, यसैले रगतको प्रवाहलाई तपाईंको लिंगमा सुधार गर्दछ। यसैले, लामो समयको लागि निर्माण गर्न र आफैलाई र तपाईंको पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सक्षम हुन।
औषधीले निर्माण सुविधाको लागि जिम्मेवार रासायनिक दूतहरूको उचित कार्यलाई पनि बढाउँछ। यदि रासायनिक दूतावासहरू छन् भने Avanafil मात्र प्रभावकारी हुनेछ। नतीजा, तपाईं औषधि को लागि यौन सम्बन्ध को प्रोत्साहित गरिएको छ कि तपाईं निर्माण को बनाए राखन को लागि मदद। तपाईंले राम्रो नतिजाको लागि यौन सम्बन्ध राख्नु भन्दा पहिले तपाईंले 30 मिनेटमा Avanafil खुट्टा लिनु पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका मा, Avanafil ब्रान्ड Stendra को तहत बिक्री गरिन्छ। उत्पादन एक मात्र हो कि यसमा विभिन्न देशहरूमा फरक ब्रान्ड नामहरू छन्।
Avanafil Dosage - मैले कस्तो अन्नानाफिल गर्नुपर्छ?
कुनै पनि अन्य औषधि जस्तै, तपाईंले निश्चित गर्नुपर्छ कि तपाइँ इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न सही Avanafil खुराक लिनु पर्छ। Avanafil खरिद गर्न बजार जानुअघि आफ्नो डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहोस्। औषधीले विभिन्न प्रकारका जस्ता पाउडर र गोलाहरू जस्तै हुन्छन्। यौन गतिविधिमा संलग्न हुनुभन्दा कम से कम 30 मिनेट स्टेन्डर लिन यो सल्लाह छ। तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ Avanafil परिणामहरू Avanafil लिने क्रममा 20-40 मिनेट पछि।
केहि अवस्थामा, परिणामहरूले विभिन्न कारक वा तपाईंको शरीरको शक्तिको आधारमा ढिलाइ हुन सक्छ। जब यो हुन्छ, अर्को खुट्टा लिनु नमिल्ने, अर्को के गर्नुमा तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न तपाईंको डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, यो दिन दुई खुराक लिन सल्लाह दिनु हुँदैन, यो खतरनाक वा गम्भीर साइड इफेक्ट हुन सक्छ जस्तै धेरै लामो समय वा टाउको दुखाइ हुन सक्छ।
मानक स्टेन्डेड डोजेज 100mg प्रति दिन हो। यद्यपि, यदि तपाईंलाई प्रभावकारी छैन भने, तपाईंको डाक्टरले यसलाई 200mg को अधिकतम मात्रामा बढाउन सक्छ। डाक्टरले 50mg द्वारा खुराक को कमी को सिफारिश गर्न सक्छन्, यदि तपाईं मुख्य खुराक संग साइड इफेक्ट को अनुभव गर्दै छन् या तपाईं अन्य रोगहरुको लागि दबाइ मा हो। Avanafil ले तपाईले छिटो नतिजाको लागि खाना लिनु अघि लिनु पर्छ। भोजन पछि खुराक ले केहि समय को लागी सामान्यतया यसको असरलाई ढिलो पार्न सक्छ।
तपाईंले आफ्नो स्टेनेडा ट्याब्लेटलाई गिलास पानीको साथ निलो पार्नु पर्छ। लागूपदार्थ लिनुअघि अंगूरको रस 24 घण्टा पिउन नदिनुहोस्। यसले तपाईंको रक्तमा गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा यो औषधिको स्तर बढाउन सक्छ। केही व्यक्तिले अन्य पेय पदार्थहरू जस्तै नरम पेय वा दूध प्रयोग गर्ने औषधि लिन निर्णय गर्न सक्दछ जुन सल्लाहयोग्य छैन। प्रभावकारी परिणामहरूको लागि पानी प्रयोग गरी र कुनै प्रतिकूल प्रभावहरूबाट जोगाउन टाँस्नुहोस्। तपाईलाई अधिकतम यौन आनन्द चाहिन्छ, तपाईंको डाक्टर द्वारा निर्धारित रूपमा एक खुट्टामा छडी।
Avanafil नतिजाहरू - कसरी अधिकतम लाभका लागि अानाफिल लिनु हुन्छ?
औषधि उत्कृष्ट नतिजाको गारंटी दिन्छ जबसम्म तपाइँ आफ्नो डाक्टरको पर्चा पछ्याउनुहुन्छ। तपाईंको डाक्टरले तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच नगरेसम्म र तिनलाई तदनुसार तपाईंलाई सल्लाह दिन अनुमति दिने औषधि खरिद नगर्नुहोस्। यसको अतिरिक्त सिफारिस गर्नु भन्दा थप खुराक लिनु अनियन्त्रित erections वा अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व हुन सक्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई सधैँ सुरक्षित पक्षमा डाक्टरको सल्लाह पछ्याउँदै हुनुहुन्छ र यदि तपाइँ खुसी महसुस गर्नुहुन्छ भने, थप निर्देशनहरूको लागि डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहोस्। मानिसहरू लागूपदार्थमा फरक फरक प्रतिक्रिया गर्छन्, र किनकि औषधी निर्माताले तपाईंलाई 20 मिनेटमा परिणामहरूको आश्वासन दिन्छ, परिणामहरू विलम्ब गर्न वा तपाइँलाई अपेक्षा गर्नु भन्दा चाँडै आउन पनि सम्भव छ।
शरीरको तातो औषधिको प्रभाव निर्धारण निर्धारण गर्न कुञ्जी हो भने भले पनि तपाइँ सबै चिकित्सकको निर्देशनहरू पछ्याउनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, केही व्यक्तिहरूले 100mg खुट्टा लिन केवल अधिकतम नतिजा र लामो खरिद प्राप्त गर्न सक्दछ जबकि अन्यहरूले खुट्टा बढाउनका लागि प्रभाव पार्ने गर्दछन्। अन्य अवस्थाहरुमा, डाक्टर को लागी मानक खुराक को कम गर्न को लागी मजबूर गरिनेछ यदि रोग साइड इफेक्ट्स को दिन मा 100gm को सामान्य Avanafil खुराक ले ग्रस्त हुन्छ। यदि तपाइँ अन्य बिरामीहरूको लागी औषधिको लागी उपचार गर्नु अघि चिकित्सकीय परीक्षामा जानुहोस् यदि निर्धारण गर्नु हुन्छ भने अन्य औषधिहरू संग Avanafil सुरक्षित हुनेछ। डाक्टरले तपाईंको अवस्था अनुसार सही हुनेछ कि ड्रगको खुट्टा डिजाइन गर्नेछ।
नकली Avanafil लागू औषधका लागि हेर्नुहोस् जुन बजारमा उपलब्ध हुन सक्छ किनभने तिनीहरू जोखिममा पर्न सक्छन्। तिनीहरूले आफ्नो यौन जीवन सुरक्षित गर्न चाहने निर्माण स्तरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुको सट्टा तपाईंको शरीरमा बढी हानि हुन सक्छ। सम्मानित विक्रेताबाट लागू औषधि पाउनुहोस् वा तपाईंको डाक्टरको मार्गदर्शन अनुसार तपाईंको नजिकको क्लिनिकबाट प्राप्त गर्नुहोस्। गुणस्तर लेबल खोज्नुहोस् र अधिक लाभहरूको आनन्द लिनको लागि सावधानी निर्देशनहरू पढ्नुहोस्।
Avanafil खुट्टा लिनु अघि निम्नलिखितको नोट लिनुहोस्:
Avanafil दृश्य विरूपण र चक्कीपन हुन सक्छ। सुरक्षित पक्षमा हुन, तपाईं यो प्रतिक्रियाहरूको बारेमा अवश्य हुनुपर्दछ तापनि तिनीहरू एक व्यक्तिबाट अर्को भिन्न हुन्छन्। यदि तपाईंलाई औषधि लिन पछि चक्कर महसुस हुन्छ भने, केही मिनेटको लागि सुत्नुहोस्, र प्रभावहरू चल्नेछ। रक्सीको साथ यो औषधि लिने रक्तचाप छोड्ने संभावनाहरू बढाउँछन् जुन तपाईंलाई मूर्ख बनाउन वा चक्की लगाउन सक्छ। रक्सी पिउन र त्यसपछि तपाईंको लिनुहोस् Avanafil खुराक तपाईंको यौन कार्यलाई कमजोर पार्न सक्छ।
जब तपाईंको इरेक्शन ड्रग्स खाए पछि चार घण्टा भन्दा बढिमा रहन्छ, तुरुन्त तपाईंको डाक्टरमा पुग्नुहोस्। सर्त इरेक्शनको छ घण्टा भित्रमा उपचार गर्नुपर्नेछ किनकि बढी ढिलाइले लि tiss्ग टिश्युहरू वा अपरिवर्तनीय समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। एक वा दुबै आँखामा देख्ने घाटा अनुभव गर्नेहरूका लागि लागूपदार्थ सेवन रोक्नुपर्दछ र छोटो समयमा सम्भव भएसम्म डाक्टरमा पुग्नु पर्छ। त्यहाँ अन्य समस्याहरू छन् जुन तपाईंले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईं पहिलो पटक अभानाफिल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ जस्तो कि हल्का टाउको दुखाइ, वा परिणाम प्राप्त गर्न ढिलाइ पनि। यी तपाईको शरीरको प्रतिक्रियाका कारण सामान्य प्रभावहरू हुन्, तर तिनीहरू केहि मिनेट पछि जान्छन्। घटनामा प्रभावहरू 30 मिनेट भन्दा बढि समयसम्म रहिरहन्छ, स्थिति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
काममा वा ड्राइभिंग गरेको बखत ड्रग नलगाउनुहोस्। प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ र एक दुर्घटना मा परिणाम। सँधै निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको साथी नजिक छ र औषधि लिनु अघि यौनको लागि पनि तयार छ। प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ यदि तपाईं Avanafil खुराक लिनुभयो, जगाए र सेक्स गर्न असफल। तपाईं आफ्नो लि problems्ग मांसपेशिहरु लाई क्षति पुर्‍याउने छ जसले तपाइँको समस्यालाई झन् खराब बनाउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, औषधिले तपाईंको लि muscles्गको मांसपेशिहरूमा रगत प्रवाह बढाउँदछ, र यदि अ its्गले यसको काम गर्दैन भने, टिश्युहरू अधिक खतराहरू हुने अधिकतम स्तर बाहिर तानिन्छ। तपाईको डाक्टरले परिस्थितिलाई उल्टाउन सक्छ यदि तपाईले समय समयमा उसलाई / उनलाई बोलाउनु भयो तपाईले याद गर्नुभयो कि तपाई Avanafil प्रयोग गरेपछि यौन सम्बन्धमा संलग्न हुनुहुन्न हुन सक्छ एक कारण वा अर्को कारणले।
केही व्यक्तिहरूले अर्को खुट्टा लिने सोच राख्छन् भने ती विशेषज्ञहरूले दिएका 40 मिनेटको फ्रेम भित्र नतिजाहरू प्राप्त गर्दैनन्। तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि यदि तपाई यौन यौनसम्पर्क नगर्दा परिणामहरू ढिलाइ हुन सक्छ वा तपाईंले खाना पछि औषधि लिनुभयो। तपाईंको पेट खाली हुनु पर्दछ, यदि तपाईंलाई छिटो नतिजा चाहिन्छ र तुरुन्तै तपाईंको खुट्टा लिने पछि यौन उत्साह प्राप्त गर्नु पर्दछ। जब तपाईं सेक्स मूडमा हुनुहुने कुनै नतिजाको आशा नगर्नुहोस्। तपाईंको दिमागले अन्य संलग्न शरीर हार्मोन संग एक साथ काम को लागि तयार हुनु पर्छ। दबाइले तपाईंको यौन अंगमा रक्त प्रवाह बढाएर थप विस्तारित अवधिको लागि निर्माण कोयम राख्न मद्दत गर्दछ।
Avanafil को प्रयोग गर्नु हुँदैन?
यद्यपि यी सामान्य एड ड्रगहरू मानिसहरू समस्याको समस्यामा मद्दत गर्न उत्कृष्ट हुन्छन्, यो विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। सबैले यो औषधि प्रयोग गर्न सक्दैनन्; उदाहरणका लागि, स्टेभेन्द्रलाई महिलाहरूको लागि बनाइएको छैन। तथापि, यदि महिलाले औषधि प्रयोग गर्दछ भने यो स्पष्ट हुँदैन, तर पुरुषहरूले उनीहरूको निर्माण कोयम राख्न मद्दत गर्न मात्र स्पष्ट रूपमा बनाइन्छ। बच्चाहरु लाई अानानाफिल को उपयोग गर्न को लागी पनि अनुमति छैन किनकी उनको शरीर को यस औषधि को प्रतिक्रिया को बनाए रखने को लागि पर्याप्त बलियो छैन। किशोरहरु वा 18 वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू पनि लागू औषधि प्रयोग गरेर निषेधित छन्।
केही पुरुषहरूले यो औषधि प्रयोग गरी विशेष गरी जटिल रोगहरू जस्तै गुर्दे विफलता, अस्थिर एनालिना, कम रक्तचाप, र अन्य रक्तचापको कारण उच्च रक्तचापको सामना गर्नुपर्दैन। दायाँ Avanafil खुट्टा सिफारिस गर्नु अघि तपाईंको डाक्टरले तपाईको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्नुपर्छ। यदि तपाइँसँग यौन सम्बन्धबाट टाढा चिकित्सकले तपाईंलाई सल्लाह दिएको छ भने तपाईले यो औषधि पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। हृदय समस्या अर्को रोग हो जसले तपाईंलाई औषधि प्रयोग गर्न रोक्न सक्छ। Avanafil रगतको प्रवाह बढाउँछ, जसको अर्थ तपाईंको हृदय रगत क्यान्सर पम्प गर्न बाध्य हुनेछ र यदि तपाईंसँग कुनै हृदय रोग छ भने, Avanafil को प्रयोग गरी शर्त बदल्न सक्छ।
पुरुषहरु को लागि जो कभी अनुहार को रोग को रूप मा गैर-अट्टेटिक एन्टरियर भनिन्छ ज्ञानेन्द्र ओप्टिक न्यूरोपैथी (NAION) पनि यस औषधि देखि रहन पर्छ। रोगले आंशिक क्षतिको कारणले गर्दा ओप्टिक तंत्रिकालाई क्षति पुर्याउँछ। केहि अवस्थामा, रोगीहरूले एक वा दुवै आँखामा दर्शन गुमाउन सक्छन्, र अवस्था स्थायी हुन सक्छ, वा यदि तपाईं समय मा गुणवत्ता उपचार पाउनुहुन्छ, शर्त अस्थायी हुन सक्छ। आफ्नो डाक्टरलाई जानकारी दिनुहोस् यदि तपाईं एक पटक यो रोगबाट पीडित हुनुभयो भने। अनावानाफिल ले केहि समय को लागि दृष्टि को कमी हो पछि तपाईंलाई शरीर प्रतिक्रिया को एक अनुभव हो। यसकारण, यदि तपाईंसँग समस्या थियो भने, यो बिरामी पुनर्जीवित गर्न वा यसलाई अझ बदल्न सक्छ।
अवयवहरू हेर्नुहोस् यदि तपाईंलाई कुनै पनिसँग एलर्जी छ भने, त्यसपछि अन्य निर्माण डिसफंक्शन औषधि विधिहरू प्रयास गर्नुहोस्। कहिलेकाँही औषधी लिई पछि तपाईले एलर्जीको अनुभव गर्नु भएको छ, अर्को डोज प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सूचित गर्नुहोस्। एकपटक तपाईले एलर्जी भएको याद गर्नुभयो भने सेन्ड्रा प्रयोग गर्न रोक्न सल्लाह दिइन्छ। जे होस्, केही एलर्जी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तपाइँको डाक्टरलाई थाहा पाउन एलर्जी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यदि तपाइँ Avanafil पूर्ण रूपमा उपयोग रोक्न अघि। थप रूपमा, ii पछिल्लो छ महिनामा, तपाईंले असामान्य मुटुको धडकन अनुभव गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि अन्य डिसफंक्शन औषधिहरू विचार गर्नुहोस्।
Avanafil ले अन्य PDE5 अवरोधकहरु जस्तै tadalafil संग, vardenafil वा sildenafil। सबै ड्रगहरू लगभग एकैसाथ काम गर्छन् र तिनीहरूलाई एक पटकमा लैजान्छ भन्ने अर्थ हो कि तपाइँ दुर्व्यवहारमा हुनुहुन्छ जसले साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ। स्टेभेन्द्रले तपाईंलाई एचआईभी र एड्स जस्तै यौन संचारित रोगहरूबाट बचाउँदैन। यसकारण, औषधि लिन पछि सुरक्षात्मक गियरहरू प्रयोग गर्नुहोस् किनभने यो केवल लामो समयसम्म तपाईं बनाउन सक्षम बनाउँछ। तपाईंको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस् यदि तपाईंले पछिल्लो केहि महिनाहरूमा कुनै शल्यक्रिया गर्नुभएको हुनाले यसले रिकभरी प्रगति सम्झौता गर्न सक्छ।
संक्षेपमा, स्वास्थ्य परीक्षणको लागी तपाईंको डाक्टरमा जानुहोस् र दायाँ खुराकमा व्यावसायिक सल्लाह पाउनुहोस्। धेरै मानिसहरु औषधिकाहरुमा भाग लिनु भन्दा पहिले नै डाक्टर संग परामर्श गर्नु भन्दा पहिले नै धेरै खतरनाक औषधि खरिद गर्न को लागी। प्रायः पुरुषहरु जसले डाक्टरको सल्लाह बिना Avanafil लिन्छन्, तिनीहरूसँग ठूलो साइड इफेक्टको अनुभवको उच्च संभावना छन्।
कसले अनावान्तिलाई सावधानीपूर्वक लिनुपर्छ?
Avanafil एक शक्तिशाली ड्रग हो जुन केही मान्छेले सावधानीपूर्वक लिनु पर्ने माग गर्दछ। उदाहरणका लागि, औषधि प्रयोग गर्दा 70 वर्ष भन्दा माथि पुरुषहरू सतर्क हुनुपर्छ। शरीरको शक्ति तपाईंलाई उमेरको रूपमा तल जान्छ। Avanafil खुसी कि आफ्नो शरीर को शक्ति भन्दा बाहिर छ धेरै खतरनाक हुन सक्छ, र प्रतिक्रिया अपेक्षा भन्दा ठूलो हुन सक्छ। बरु तपाईलाई चाहना बढाउनको लागी, तपाईं साइड इफेक्टहरूको उपचारमा अस्पतालमा केही समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग जिगर समस्या छ भने तपाइँले लिनु पर्ने एानानाफिल खुसीहरू हेर्न आवश्यक छ। तपाईंको चिकित्सकलाई समस्या बुझ्न दिनुहोस् र स्वास्थ्य निदान पछि 50gm वा थप द्वारा तपाईंको खुट्टा कम गर्न सक्दछ।
पुरुषहरु रक्तचाप देखि पीडित जस्तै हेमफिलिया वा सक्रिय पेप्टिक अल्सर संग। अन्य अवस्थाहरू जसले मानिसलाई अानानाफलाई सावधानीपूर्वक लिन आवश्यक छ जब एक लेकिमियाबाट पीडित हुन्छ जुन लामो समयसम्म खटिद गर्न सकिन्छ। र जो शारीरिक रूप देखि असामान्य पेनिज जसरी गंभीर घुमावट जस्तै, र धुन।
विगत6महिनामा पुरुषहरु जो एक स्ट्रोक, एक दिल को दौरा या संध्या (एक अनियमित र जीवन को धमकी वाला दिल को धब्बा) को सामना गरेको छ। यो मानिसहरु द्वारा दिल को विफलता देखि पीडित हो द्वारा उपभोग नहीं गर्नु पर्छ।
Avanafil दुष्प्रभाव - सक्छ Avanafil मलाई साइड इफेक्ट गर्न सक्छ?
चिकित्सा रसायन र अन्य पदार्थहरूको एक संयोजन हो जुन सँधै सबै निकायहरूसँग सहमत नहुन सक्छ। अधिकतर ड्रगहरू तिनीहरूको साइड इफेक्ट छन्, र Avanafil कुनै फरक छैन, र यसैले हामी तपाइँलाई साइड इफेक्टहरूको बारेमा सूचित गर्दैछौँ ताकि तपाईं सतर्क हुन सक्नुहुनेछ र औषधि प्रयोग गर्दा तयार हुन सक्नुहुनेछ। अयानाफिलको प्रयोग गरी आएको केही साइड इफेक्टहरू तल सूचीबद्ध भएका सूचीहरू र केवल किनभने एउटा साइड इफेक्ट तल नाम दिइएको हो यसको अर्थ यो तपाइँसँग हुने छैन।
चकितता - Avanafil को प्रयोग तपाईंलाई चक्कर बनाउन सक्छ र यसैले सचेत हुन सक्छ त्यसैले यो आवश्यक छ कि तपाईलाई कुनै पनि मेनु वा ड्राइभिङ सञ्चालन गर्न प्रयास गर्नु भन्दा पहिले तपाईं ठीकसँग ठीक हुनुहुन्छ। यो औषधी लिन पछि तपाईले विजय वा बेहोशी महसुस गर्नुहुन्छ, यो सल्लाह दिइन्छ कि यी लक्षणहरू टाढा सम्मसम्म तपाईं केही समयसम्म लाग्नु हुन्छ।
प्राइपिजम - यसको मतलब यो हो कि कहिलेकाँही ईरेक्शन यो भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ। यदि तपाईंको निर्माण चार घण्टा भन्दा बढिमा रहन्छ भने, तपाईंले तुरुन्तै एक चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ। प्रिियापिजमको छ घण्टा भन्दा कममा उपचार खोज्नु घातक हुन सक्छ। यो किनभने यसले लि in्गमा फेला परेका ऊतकोंलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ जसले परिणामस्वरूप स्थायी रोगको लागि निम्त्याउँदछ।
धब्बा भएको दृष्टि - दुर्लभ अवसरोंमा अवानाफिलले हानिको कारण वा आँखाको भावनालाई एक नजरमा वा पनि दुवैमा घटाउन सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, तपाइँ औषधि प्रयोग गर्न र तुरुन्तै तपाइँको डाक्टरलाई हेर्नु पर्छ।
सुन्नु समस्याहरू - यदि तपाईंले अचानक कमी वा सुनवाईको अनुभव गर्नुभयो भने तपाईले लागू औषधि प्रयोग गर्न छोड्नु पर्छ र चाँडै नै सम्भवतः मेडिकल ध्यान लिनु पर्छ।
कुनै पनि यौन प्रोत्साहन बिना जेनेरिक क्षेत्र मा सामान्य र खुट्टा भन्दा बढी मूत्र गुजरने बिना बिना निर्माण हो रही छ। यसले पहिलेको स्खलनको कारण पनि हुन सक्छ।
स्वादिष्ट समस्याहरू - यी समस्याहरू गट र दहिरोसँग समस्याहरू, कम पेटमा दुखाइ, पेट 'गस्ट्रिस्टिस' र निन्द्रामा सूजन।
रगतमा प्रोस्टेट-विशिष्ट एंटीजन (पीएसए) र bilirubin र creatinine को वृद्धि गरिएको स्तर।
रक्तचाप - जो शराब प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमा ड्रगले रक्तचापमा कमी ल्याउँदछ र यसले गैर-शक्समा रक्तचाप बढाउन सक्छ।
परिधीय edema - द्रवहरु को अधिक अवधारण को कारण पैर र टास्कहरु सूगल हुन सक्छ। यसले पनि मांसपेशिहरु र स्पाजमहरु मा दुख को कारण हुन सक्छ।
अन्य पक्षमा प्रभावहरू समावेश छन्; छातीको दुखाइ, वजन बढाने, हृदय मर्मरहरू, मौसमी एलर्जी, पीडा दुखाइको मांसपेशी तंग, असामान्य हृदय ताल, सिनुस रेजिज र सिरदर्द, जिगर एंजाइमहरू, गर्म फ्लशहरू, अनिद्रा, निद्रा र थकान, खुसी, ट्याचकार्डिया, र नाक र गल्तीको सूजन बढ्यो। , अवरुद्ध वा चलिरहेको नाकको कारण र गले गहिराइयो।
Avanafil अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ यो अत्यावश्यक छ कि तपाईं आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईं महत्वपूर्ण शरीर परिवर्तनहरू वा असुरक्षित बेलायतमा जब तपाईं ड्रगमा हुनुहुन्छ। केही जना रोगीहरूले यी लक्षणहरूको अनुभव गरेपछि तिनीहरूले अानानाफिल लिनुभयो र उनीहरूलाई बेवास्ता गरे जसले स्थायी समस्याहरू जस्तै दृष्टिको हानि गरे। अन्य मान्छे लक्षण थिए र Avanafil को प्रयोग गरेर रोक्न, र बरु, तिनीहरूले त्यस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्थे जुन धेरै स्वस्थ छैन।
Avanafil जोखिम - के अन्य औषधीहरूले अनावश्यक प्रभाव पार्नेछन्?
जस्तै मैले भन्यो कि दवाईले रासायनिक पदार्थहरू हुन् र रसायनहरूले अन्य यौगिकहरूसँग प्रतिक्रिया गर्छन्। प्रतिक्रियाले सकारात्मक वा नकारात्मक नतिजा दिन सक्छ, यसैले तपाईंको चिकित्सक वा फार्मासिस्टलाई तपाईले लिन सक्नुहुने अन्य ड्रगको बारेमा सूचित गर्न महत्त्वपूर्ण छ र यसमा यी समावेश कि तपाईंले काउन्टर वा हर्बल औषधि किन्नुभयो। त्यसैगरी, अ्यानानाफिलमा हुँदा नयाँ औषधि लिन शुरु गर्नु अघि, तपाइँको चिकित्सकसँग जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो औषधी उपयुक्त छ।
Avanafil नाइट्रेट दबाइको कुनै पनि प्रकारको साथ मिल्दो छैन, र यसको अर्थ उनीहरूलाई एक-अर्कासँग कहिल्यै लिइएन। यो कारणले गर्दा दुवैको मिश्रणले रक्तचापमा गहिरो गिरावट ल्याउन सक्छ जुन बारीमा चक्कर लाग्ने कारणले, बेहोशी र घटनाका सबै भन्दा खराब माटोमा आक्रमण गर्दछ। यदि एक नाइट्रेट व्यक्तिलाई जसले Avanafil लिनु भएको छ, यो 12 घडी अघि Avanafil को खुराक पछि पछि गएका हुनु हुँदैन। संयोजन नाइट्रेट समावेश गर्दछ:
Glyceryl trinitrate, isosorbide mononitrate (Imdur, Ismo, Monoket), र isosorbide डिननाइट्रेट (Isordil)।
यी ड्रगहरू एन्जिना वा हृदय विफलताको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाइँ एनेनाफिल प्रयोग गरेर साइड प्रभावको रूपमा छातीको दर्द पाउनुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई उपचार गर्न कुनै नाइट्रेट प्रयोग गर्नुपर्दैन। पुरुषहरू तल सूचीबद्ध लागू औषधिहरू प्रयोग गर्दै पनि Avanafil प्रयोग गर्नबाट बच्न किनभने तिनीहरू शरीरमा Avanafil को ब्रेक घटाएर यसैले यसको साइड इफेक्टको संभावना बढ्दै जान्छ। यी औषधिहरू यसमा समावेश छन्:
तपाईले अवानाफिलको प्रयोग बेवास्ता गर्नुपर्नेछ बिरामी उपचारको लागि प्रयोग हुने अन्य औषधिहरूको साथ। यस औषधि एक साथ प्रयोगको सुरक्षा अझै प्रमाणित हुन सकेको छैन। साथै, अल्फा-ब्लकरहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले अवानाफिल लिनबाट अलग रहनु पर्छ किनकि यसले रक्तचापमा गिरावट आउने सम्भावना बढी हुन सक्छ जसले फलस्वरूप बेहोश हुनु र झुकिने सम्भावना बढाउँदछ। अल्फा-ब्लकरहरू लिने व्यक्तिहरू अभानाफिल सुरु हुनु अघि अल्फा-ब्लकरहरूको स्थिर डोजमा राख्नुपर्दछ। त्यस्ता उदाहरणहरूमा, Avanafil 50mg को एक खुराक मा शुरू हुन पर्छ। यदि व्यक्ति पहिले नै अवानाफिलमा थिए र बिरामीलाई अल्फा-ब्लकरमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अल्फा-ब्ल्कर सम्भव न्यूनतम खुराकमा सुरु गरिनुपर्दछ। निम्नलिखित केही अल्फा-ब्लकरहरू छन्:
एभानाफिलको प्रयोग गर्दा मानिसहरू उच्च रक्तचापको दबाइमा पनि सतर्क हुनुपर्छ। Avanafil संग एंटिहाइन्टर्टिङ संयोजनले रक्तचापमा थप ड्रप बढाउन सक्छ। यो ड्रप धेरै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, तर रक्तचापमा बढि गिरावटको कारण चकलेटको कारण हुन सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, यो तपाईंको डाक्टर संग जानकारी साझा गर्न अनिवार्य छ।
तल सूचीबद्ध दबाइहरु Avanafil को रक्त स्तर बढ्न सक्छ। यदि तपाइँ यी औषधीहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ कि तपाइँले Avanafil को 100mg सेवन भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र खुट्टाहरू 48 घण्टाको खुट्टामा खुट्टाहरू बीचमा खानुपर्छ। यी ड्रगहरू निम्न हुन्:
केही औषधिहरूले Avanafil को प्रभावकारितालाई पनि कम गर्न सक्छ। यो Avanafil को ब्रेकडाउन को गति को क्षमता को द्वारा प्राप्त हुन्छ। यी औषधिहरू यसमा समावेश छन्:
Avanafil पनि अन्य PDE5 अवरोधकहरू सँगै प्रयोग गर्न सकिँदैन जुन असुविधाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस्ता औषधीहरूको उदाहरणहरू समावेश छन्:
Vardenafil लाई लेवीट्र्रा भनिन्छ
Sildenafil को रूप मा सामान्य रूप मा जानिन्छ Viagra
एभनाफिल समीक्षाहरू - के एक सुरक्षित एड ड्रग Avanafil छ?
27th अप्रिल 2012 मा, एफडीएले Avanafil लाई एक सुरक्षित औषधिको रूपमा अनुमोदन गर्‍यो पुरुषहरू जुन दुर्बलताबाट पीडित छन्। "यस अनुमोदनले रोग बिग्रेको अनुभव गर्ने पुरुषहरूका लागि उपलब्ध उपचार विकल्पहरूको विस्तार गर्दछ र बिरामीहरूलाई उनीहरूको डाक्टरसँग परामर्श गरेर उनीहरूको आवश्यकताको लागि सबैभन्दा उचित उपचार छान्न सक्षम गर्दछ," औषधि मूल्यांकन III को कार्यालयका उप निर्देशक, एमडी भिक्टोरिया कुसियाक, एमडी एफडीएको औषधि मूल्यांकन र अनुसन्धान केन्द्र, एक समाचार विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
क्लिनिकल परीक्षणहरू औषधिको प्रभावकारिता र यसलाई उपभोग गर्न कत्तिको सुरक्षित छ भनेर जाँच्न आयोजित गरिएको छ। क्लिनिकल परीक्षणहरूमा, केही पुरुषहरूलाई 20 मिनेट भन्दा कममा ड्रगको प्रभावकारिताको अनुभव भएको रिपोर्ट गरिएको थियो जबकि अरूले यसको इरेक्शनहरू प्राप्त गर्न6घण्टा सम्म कुर्नुपर्‍यो। 77% पुरुषहरू जो क्लिनिकल परीक्षणहरूमा सामान्य रोगबाट ग्रस्त थिए। र मधुमेह सम्बन्धी रोगबाट पीडित पुरुषहरू मध्ये कम्तिमा 63% पुरुषहरूले सुधारिएको निर्माणको अनुभव गरे।
Avanafil को प्राथमिक र सबै भन्दा साधारण नकारात्मक प्रभावहरु पीठ मा, एक भरपूर नाक, फ्लशिंग, र टाउको दुखाइ मा दुखाइ समावेश गर्दछ। अवानाफिलको परिणामको रूपमा, लामो समयसम्म निर्माणको घटनाहरू सुनेका लागि यो धेरै दुर्लभ छ, चार वा बढी घण्टामा टाढा रहन्छ। तर यो घटना भएको बेलामा, यो जितनी चाँडै नै चिकित्सा ध्यान खोज्न आवश्यक छ।
Avanafil धेरै व्यक्ति सुरक्षित छ जसले शराब प्रयोग गर्दछ। Avanafil र शराब निम्न रक्तचाप दुवै यसैले दुई को मिश्रण गर्दा रक्तचाप मा एक ठोस र अत्यधिक ड्रप हुनेछ। यो, बारी मा, गंभीर सिरदर्द, मूर्खता, र एक बढा हृदय दर को कारण हुनेछ। Avanafil लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने सुरक्षित औषधि हो जब सम्म तपाई चिकित्सकहरु लाई अनुमति दिईएको समूह भित्र हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ यसको कुनै पनि सामग्रीमा एलर्जी हुनुहुन्छ भने पूर्ण सुरक्षाले औषधि प्रयोग गर्दैन। यदि तपाई एलर्जीको अनुभव गर्नुहुन्छ भने तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिस्टलाई थाहा छ।
सधैँ तपाईंको डाक्टर वा ड्रग निर्माताको द्वारा दिइएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। चिकित्सकीय परीक्षा आवश्यक छ कि औषधि तपाईंको लागि सुरक्षित छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। केवल फार्माससीसीमा नजानुहोस् वा तपाईंको डाक्टरले बिना अनलाईन Avanafil अनलाइन खरीद गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग एक स्वास्थ्य अवस्था छ वा तपाईं कुनै पनि रोगको दबाइबाट गुज्रिरहनुभएको छ भने, औषधि तपाइँको लागि सुरक्षित नहुन सक्छ वा तपाईलाई सानो खुट्टा लिन आवश्यक पर्दछ। औषधि प्रयोग गर्दा डाक्टरको सल्लाह पालन गर्नेहरूको लागि, कुनै पनि गंभीर साइड इफेक्टको बारेमा गल्ती छैन।
विभिन्न ग्राहकहरू अन्नाफिल समीक्षाहरू हेर्दै, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि अधिकांश मस्तिष्कले औषधि प्रयोग गरेपछि परिणामहरू खुसी हुन्छन्। विभिन्न प्लेटफार्महरूमा यस औषधिको उत्कृष्ट मूल्याङ्कन एक सूचक हो जुन यसले डेलिभर गरिरहेको छ र यसले धेरै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको बनावट बनाए। औषधि संग समस्या भएको केही मान्छे समूह हुन सक्छ जब औषधि प्रयोग गर्दा सावधान रहनु आवश्यक छ जुन पुरुषहरु लाई विभिन्न रोगहरु जस्तै हृदय रोग र अन्य पुरानो बीमारहरु को बीच मजबूत हुन्छन्।
भण्डारण र निपटान सुरक्षा
यो पनि महत्वपूर्ण छ कि तपाईं आसपास को मान्छे र तपाईंको आसपास को औषधि देखि सुरक्षित राख्नुहोस। औषधि भण्डारण एक ठुलो र सुक्खा ठाउँमा अत्यधिक गर्मी र नमी बाट टाढा। कन्टेनर सधैँ कडा रूपमा बन्द हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् र औषधिलाई हरेक पटक बालबालिकाको पहुँचबाट बाहिर राख्नु पर्छ। तपाईंको औषधि बन्द गरिएको ड्राजरहरूमा राख्नुहोस् जुन बालबालिकाको पहुँच र दृष्टि भन्दा धेरै उच्च छ।
यदि तपाईंले औषधिको साथ गर्नुभयो भने, र अब तपाईलाई यसको आवश्यकता पर्दैन, तपाईले यसलाई निषेध गर्नुपर्छ कि पितर, बालबालिका, र अन्य व्यक्तिहरू यसलाई उपभोग गर्ने छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्दछ। तपाईंको फार्मासिस्ट वा डाक्टरसँग कुराकानी गर्नुहोस् ताकि तपाईं लिङ्क ब्याक प्रोग्रामको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमले तपाइँलाई प्रयोग गर्नुभएका सम्पूर्ण औषधि फिर्ता लिन मौका दिन्छ। यसले मानव, जनावर र बिरुवाहरूलाई जहरबाट बचाउँछ।
Avanafil पाउडर प्रदायक - म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छ Avanafil (330784-47-9)?
Avanafil पाउडर प्राप्त गर्न, तपाईं आफ्नो स्थानीय फार्मासिस्ट भ्रमण गर्न र खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हाल, त्यहाँ Avanafil अनलाइन बेचने सप्लायरहरू छन्; तपाईं आफ्नो घर वा कार्यालयको सान्त्वनामा हुँदा एक अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। मूल्यहरू एक आपूर्तिकर्ताबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छन्। तथापि, आफ्नो अनुसन्धान गरौं पहिले नकली औषधी खरिद गर्न खतराबाट बच्न सही व्यापारीलाई थाहा पाउनुहोस्। धेरै अन्नानिल बिक्रेता अनलाइनहरूको उपलब्धता धेरै रोगीहरूलाई उत्तम निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ। त्यहाँ सही Avanafil विक्रेता प्राप्त गर्न विचार गर्नु पर्छ कि विभिन्न कारकहरू छन्। विक्रेता-ग्राहक समीक्षाहरू पढ्नुहोस्; यसले तपाईलाई कसरी विक्रेताले सञ्चालन गर्ने भन्ने झलक दिनेछ।
डिलिवरी टाइमलाइनहरू, अवानाफिल मूल्य, र प्रतिष्ठा उत्तम जेनेरिक एड ड्रग्स अनलाइन डीलरको खोजी गर्दा तपाईँलाई निर्देशन दिनुपर्दछ। ग्राहक सहायताडेस्क तपाईका प्रश्नहरूको जवाफ दिईरहेको छ, र सम्मानित कलको लाइनहरूमा पनि छिटो छिटो हुनुपर्दछ Avanafil अनलाइन विक्रेता भर पर्नु पर्छ। समय भरोसा गर्नुहोस् Avanafil पाउडर आपूर्तिकर्ताहरू अध्ययन गर्न को लागी एक आप भरोसा गर्न सक्नु अघि। तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई साथीको वरिपरी उत्तम औषधि बिक्रेतालाई पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ वा तपाईंलाई सम्मानित फार्मेसीलाई बुझाउँछ। केहि क्लिनिकहरूले स्टेएन्डेलाई उनीहरूको फार्मेसीमा भण्डार गर्छन्, जसले तपाईंको कामलाई दबाइको रूपमा सजिलो बनाउँछ र तपाइँ यसलाई त्यहाँबाट उठाउनुहुन्छ।
तपाइँ कुनै पनि विक्रेताबाट लागू औषधि खरिद गर्न निर्णय गर्नु अघि, विक्रेतालाई प्रमाणित सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा संचालित गर्न निश्चित छ। Avanafil बजार मा कुनै अन्य जस्तै एक औषधि हो र पेशेवरहरु द्वारा बेचा जान जान्छ कि यो कसरि काम गर्दछ। विक्रेताले कुनै पनि चिन्ताको स्थितिमा तपाईलाई सल्लाह दिन सक्षम हुनुपर्दछ, र केवल एक मेडिकल प्रोफेशनले तपाईंलाई मद्दत गर्न एक स्थितिमा हुन सक्छ। मान्यता प्रमाण कागजातहरू हेर्दै केवल विक्रेताको औषधी बेच्न योग्य छ भनेर जान्न मात्र एक मात्र प्राकृतिक मार्ग हो।
Avanafil ED उपचारको लागि ताडाफाफिल र सिल्डेनफिल किटरेटको तुलनामा
त्यहाँ भिन्न परिप्रेक्ष्य छन् जुन तपाईं यो शीर्षक ह्यान्डल गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जब यी थ्रीस् ड्रग्सको तुलना गर्न आउँछ धेरै विद्वान र बिरामीहरूको फरक मत हुन्छ। ड्रग्स लगभग समान छन् किनकी तिनीहरू सबै डिसफंक्शनको उपचार गर्छन्, र तिनीहरू लगभग समान तरिकाले काम गर्दछन्। ताडालाफिल, सिल्डेनाफिल र अवानाफिल, हरेक ड्रगको यसको फ्यान हुन्छ। त्यहाँ एक लाग्छ कि एक औषधि अर्को भन्दा राम्रो छ र अरुहरुको फरक मत छ। सामान्यतया, मानव निकायले बिभिन्न औषधिहरुमा बिभिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया दिन्छ, र यही कारणले कि कुन औषधि राम्रो छ भन्ने बारे बहस भइरहेको छ। यी सबै औषधिहरूको समावेश गरी एउटै तीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु हो;
मद्दत व्यक्तिहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्नुहोस्
केही समयको लागि निर्माण राख्नुहोस्
पुरुषहरूलाई कडा आश्रममा मद्दत पुर्याउनुहोस्
सबै dysfunction मौखिक जस्तै sildenafil citrate, tadalafil, र Avanafil phosphodyterase inhibitors टाइप5सम्बन्धित छ। ती सबै लिis्गमा रक्त नलीहरूको भित्तामा नाइट्रिक अक्साइड अणु प्रभाव लम्बाएर कार्य गर्दछन्। रक्त नलीहरूमा नाइट्रिक अक्साइड उपस्थिति लिis्गमा रगत प्रवाह बढाउँदछ र केही समयको लागि प्रवाहलाई कायम गर्दछ जसले कडा, र लामो समयसम्म निर्माणको परिणाम दिन्छ। तीन औषधि बीच महत्वपूर्ण भिन्नता तिनीहरूको कार्यको अवधि र गति हो। जेनेटिक भिन्नताका कारण बिरामीहरूले औषधीलाई फरक फरक पार्छ। कुनै एकल औषधि प्रत्येक बिरामीका लागि राम्रो र प्रभावकारी हुन सक्दैन।
त्यसोभए दबाइहरू कति चाँडो छन् र तिनीहरूको प्रभाव कति लामो छ?
सामान्यतया, dysfunction ड्रग्स जुन चाँडो काम गर्दछ तपाईंको शरीर प्रणालीमा लामो समय सम्म रहदैन। यसको मतलव तपाईले केही समयको लागि प्रभाव मात्र महसुस गर्नुहुनेछ र तपाई सामान्यमा फर्कनुहुनेछ। केही पुरुषहरूले अरूको भन्दा द्रुत रूपमा इरेक्शनहरू प्राप्त गर्दछन्, र यो कारक हो जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ तपाईंको लागि सही औषधि छान्दा। उदाहरण को लागी, यदि तपाई सब भन्दा छोटो समय मा सेक्स को लागी योजना गर्न सक्नु हुन्छ भने स्टेन्ड्रा जस्ता द्रुत-अभिनय औषधि को लागी जानुहोस्। यो रोगीहरु को लागी लामो समय अभिनय गर्ने औषधी जस्तै tadalafil लिने योग्य हुनेछ किनकि यो केहि दिन शरीर प्रणालीमा रहन्छ।
यो औषधि जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्रान्डको नाम Sendra को मुनि बिक्री गर्दछ सब भन्दा छिटो अभिनय गर्ने असक्रिय औषधि मध्येको एक हो। धेरै बिरामीहरूको लागि, औषधि 15 मिनेटमा काम गर्न सुरू गर्दछ तपाईंको डोज पछि। अवानाफिल लगभग6देखि 8 घण्टा सम्म प्रभावकारी रहन्छ जुन तपाईंको शरीर सामान्यमा फर्कन्छ। यसको मतलब यदि तपाईले फेरि 8 घण्टा पछि सेक्स गर्नु पर्छ भने तपाईले अर्को Avanafil डोज लिन पर्छ। मानक खुराक 100mg हो, र अधिकतम 200mg हो यद्यपि यो कम गर्न वा जाँच गर्न पछि तपाइँको डाक्टरले बढाउन सक्दछ।
सामान्यतया विषाणुको रुपमा चिनिन्छ, औषधिले अानाफिल र ताडलफिलको तुलनामा एक मध्यम क्रियाकलाप दिन्छ। यो तपाईंको खुट्टा लिने क्रममा 30-60 मिनेटमा काम गर्दछ।6सम्म 12 घण्टाको लागि अन्तिम प्रभावहरू तपाईंको शरीरले औषधीलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं दैनिक यौन सम्बन्धको पक्का हुनुहुन्छ भने यो दिन कम्तीमा एक खुराक लिने सल्लाहकार छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईंको पार्टनरसँग सेक्स गर्नुभन्दा एक घण्टा मात्र एक रात लिनुहोस्। खुट्टाहरू 10mg, 20mg, 25mg, 50mg र अधिकतम खुसीमा 100mg हो।
3. ताडलाफिल (एक्सएनएक्सएक्स- 171596-29)
यो औषधि पनि Cialis को रूपमा चिनिन्छ, एक लामो-अभिनय औषधि हो, साधारणतया एक खुट्टा खुम्च्याउँदा, यसले प्रभाव महसुस गर्न एक घन्टा लाग्न सक्छ। तथापि, यो तपाईंको शरीर प्रणालीमा 2-3 दिनहरूमा उपनाम "सप्ताहांत औषधि।" को लागी खुल्छ 10mg को 20mg को बीचमा जुन तपाईले एक पटक मात्र तीन दिनमा लिनु पर्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई 2.5mg वा 5ml को सानो दैनिक खुट्टा लिन सल्लाह दिन्छ।
सामान्यतया, औषधिहरू पुरुषहरूमा डिसफंक्शन समाधान गर्न प्रभावकारी हुन्छन्। सबै भन्दा राम्रो औषधि को निर्धारण बिरामी शरीर प्रतिक्रिया र प्राथमिकता मा निर्भर गर्दछ। केही व्यक्तिलाई छोटो अभिनय गर्ने औषधि चाहिन्छ, र अरूलाई लामो-अभिनय औषधि चाहिन्छ। सँधै तपाईंको अवस्थाको लागि सहि प्रिस्क्रिप्शन छनौट गर्नु अघि तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। अब जब तपाइँ एभानाफिलले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुभयो भने, तपाइँ यसलाई तपाइँको नजीकको फार्मेसी वा अनलाइन स्टोरहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ तर निर्णय लिने तालिकामा तपाइँको डाक्टरलाई समावेश गर्न सम्झनुहोस्।
रायन एम बुर्क, जेफरी डी इभान्स, डिसफंक्शनको उपचारका लागि अवानाफिल: यसको सम्भाव्यताको समीक्षा, भास्क स्वास्थ्य जोखिम मनाग। 2012; 8: 517 – 523।
DeRogatis LR, Burnett AL। यौन दुर्व्यवहारको महामारी विज्ञान। जे सेक्स मेड। 2008; 5: 289-300।
झाओ सी, किम एस, यान डी, एट अल। प्रभावकारिता र डिसफंक्शनको उपचारको लागि एभानाफिलको सुरक्षा: मल्टिसेन्ट्रे, अनियमित, डबल-अन्धा, प्लेसबो-नियन्त्रित परीक्षणको नतीजा। बिजु इन्ट 2012 मार्च 27;
2019-03-25 10 मा: 44
नमस्कार, तपाईंले मेरो प्रस्ताव पाउनुभयो?
2019-03-263मा: 07
ठिक छ। हामी तपाईंलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नेछौं।
2019-11-175मा: 26
कान 'म्यान वाट' एन डायबेट डायट पाइल गेब्रुइक एन बेभेट डाई पाइल पेनिसिलिन हो?
2019-11-296मा: 59
हेलो, हँस निए प्रोफेशनल गेनोएग ओम यू मई एड टु जी टू जी, नीर एसेब्लिफ ड्यूर यू सेल्फ, डान्की।
2019-12-032मा: 18
War kan ek die pille kry en prys
वजन घटाने को लागि Orlistat: कसरि यो बोसो फास्ट ले सकते हो?